Iiplagi zeGalari yemifanekiso engama-33 jQuery Ungayifaka ngoku | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | jQuery, Bugcisa
Namhlanje lixesha lika Iiplagi ezingama-33 zejquery zegalari ukuba sele uza kuba nako esandleni sakho ukhetho lokumilisela. I-jQuery ilayibrari enqamlezayo eqongeni enexabiso lokwenza lula indlela onxibelelana ngayo namaxwebhu e-HTML kunye nezinye iintlobo zonxibelelwano ezinje ngobuchule be-AJAX okanye ukuphuhlisa oopopayi. Masihambe nayo.
1 Ipopu emnandi
2 Ibhokisi yefancy
3 Igalari yokuKhanya
4 Igalari yeBlueimp
5 Swayipha ibhokisi
8 Igalari efanelekileyo
11 Iifoto zeGridi
14 Ibhokisi yokuKhanya elula
15 S Igalari
16 Hlanganisa igalari
18 Shufle imifanekiso
19 Ubume beJQuery
20 Iinanogalery 2
21 Igalari efanelekileyo
22 Igalari yeFoto yeBootstrap
23 I-Lightbox iyaphendula
25 Ibhokisi yokukhanya yomfanekiso
28 Ifoto JS
30 Ukuguqula igalari
31 Igridi yejquery e-elastic
Iplagi ngokukhawuleza, ukukhanya kunye nokuphendula kwejQuery ebonakaliswa ngumxholo wayo kwiCSS, ibhokisi yokukhanya enemiqathango kunye nenkxaso ye-High-DPI Retina.
Iskripthi sebhokisi yokukhanya yejQuery yenzelwe ukubonisa imifanekiso, ividiyo kunye nokunye. Iyaphendula kwaye inokutshintsha ngokupheleleyo. Isebenzisa ukukhawulezisa kweGPU ekwenzeni oopopayi okungcono.
Enye iplagi ekufanele ukuba yiyo iyaphendula, imodyuli kwaye inokwenzeka. Ungalibali iividiyo ze-HTML5, ukwabelana ngenethiwekhi, kunye nemifanekiso yoopopayi.
Ividiyo kunye nomfanekiso ophendulayo, touch-friendly kwaye ngentando yakho ngokupheleleyo. Ikwalungiselelwe zombini iwebhu kunye neselfowuni ngemisebenzi yokuswayipha okanye iziphumo zotshintsho.
Iplagi "I-Lightbox" ilungele i-desktop, iselfowuni kunye nethebhulethi. Iphawuleka ngezimbo zomzimba, utshintsho lweCSS kunye nenkxaso yeretina ngaphandle kwezinye izinto.
Igalari yejQuery ene umphumo omangalisayo Kwaye isebenzisa oko sikubiza ngokulula kwaye sinamandla amakhulu.
Chocolat.js uyakhathala sebenzisa umfanekiso omnye okanye nangaphezulu kwesi siza ezakuhlala kwiphepha elinye.
Enye iplagi enesakhono sokwenza ifayile ye- igalari enegridi "egwebayo".
Un ibhokisi yokukhanyisa elula ephendulayo kwaye inokusetyenziselwa ukwenza umaleko odlulayo osebenza kakuhle nakweyiphi na ubungakanani.
jBox ngu enye iplagi jQuery enoxanduva lokudala igalari yomfanekiso ayisindi, iyandiswa kwaye iyaphendula.
Enye iplagi jQuery leyo yiza nemifanekiso kwigridi eguqukayo Kwaye oko kusekwe kuseto lwefoto yeTumblr.
Luxanduva lwayo ukwenza ifayile ye- Iigridi zemifanekiso "elungileyo" kwaye iyakwazi ukuzalisa zonke izithuba.
Omnye igalari yemifanekiso eyenziwe lula ngazo zonke ezo zinto sizifunayo njengokuphendula, ukuchukumisa, igridi kunye nenkxaso yokugcina ilifu.
Ibhokisi yokuKhanya elula
Igalari yeLightbox Kwidesktop nakwiselfowuni ngejQuery ngayo yonke le misebenzi uyikhangelayo: phendula, thinta izijekulo kunye nokunye.
Igalari iphendula ngoopopayi beCSS kunye nenkxaso yazo zombini ukuswayipha kunye nokuchukumisa izijekulo.
Ividiyo ephendulayo ye-jQuery kunye negalari yemifanekiso enokuphantse ithiwe enye yezona zinto zibalaseleyo kudidi lwazo. Kufuneka kuzo zonke iintlobo zeempawu kunye nenkxaso efana nevidiyo.
Iplagi ekhathalelayo bonisa iigridi zemifanekiso emincinci eyandayo kwimbonakalo yangaphambili enefuthe elifana kakhulu nelo libonwa kwimifanekiso kaGoogle.
Iphawulelwe bonisa imifanekiso ngokuhambisa isikhombisi ubangqongile kunye nezinye iindlela zokuzenza zisebenze.
Iplagi engasindi ilungele ukudala iigalari ezinezinto ezininzi ukufana kunye neGoogle okanye iFlickr, Enye yewebhusayithi yokufota ngokugqwesa.
Le galari iyayinyamekela ngokulinganayo usasaze yonke imifanekiso onayo kwiwebhu. Iifoto zisekwe kwinqanaba lesikhongozeli esingagqibekanga. Igalari efanelekileyo yeendawo zokuphefumla.
Igalari yeFoto yeBootstrap
Le iplagi iya kuyikhathalela yenza ngokuzenzekelayo igalari ngokusekwe kuluhlu olungakhethiyo lwemifanekiso.
Iiplagi zebhokisi yokukhanya yeJQuery ubunzima obuphantsi kunye nemifanekiso ephendulayo.
Un iplagi yecarousel (nolu uluhlu olukhulu lwazo) kunye negalari kunye neslidwshow yejQuery kunye neZepto.
Ibhokisi yokukhanya yomfanekiso
Igalari yefoto yejQuery Isimahla ngeealbham kunye nokulayisha kwangaphambili.
Omnye igalari yomfanekiso omncinci ngenkxaso yokuthinta engayi kushiya nabani na ongakhathaliyo.
Iigalari eziphendulayo onokuyila ngaphandle komzamo omncinci.
Qalisa ukudala igalari ye-3D ngomnxeba weJS.
Igridi yejquery e-elastic
Omnye ukukhanya kwegalari kunye nomsebenzisi-ongumhlobo okhuthazwe kukukhangela umfanekiso kuGoogle Sebenzisa igridi yemifanekiso ye-thumbnail ngokujonga kwangaphambili.
Igalari yemifanekiso ene Ukusondeza jQuery. Enye yezona zinto zangoku kuluhlu lonke.
Un ilula kakhulu iplagi jQuery kwaye iyakwazi ukwenza igalari eseludongeni kunye neeopopayi ezitshintsha izinto ngokungenamkhethe. Kulula ukuyisebenzisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » Iiplagi ezingama-33 zejquery zegalari onokuzisebenzisa kwiwebhusayithi yakho
Molo: Ndijonge ukwenza igalari yebhokisi ekhanyayo yeeVIDIYO EZIYIZO MFANEKISO, ezingasuki ku-YouTube, kodwa ndizigcinile kwi-pc yam. Ndijonge ukwenza i-thumbnail ngokuhamba kwaye xa ndicofa kwividiyo ivula kwibhokisi yokukhanya okanye iwindow pop kwaye andazi ukuba njani. Enkosi
Iipowusta ezintsha zikaHan Solo zivelela ubuchwephesha bazo